MOETHIHAAUNG: မြောက်အမေရိကတိုက်က အအေးတွေမြန်မာပြည်ဖက် ကူးလာဦးမလား?
မြောက်အမေရိကတိုက်က အအေးတွေမြန်မာပြည်ဖက် ကူးလာဦးမလား?
Weather News Upate
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ IRI(International Research Institute)က ၂၀၁၄နှစ် ဇန်န၀ါရီလ၊ဖေဖေါ်ဝါရီလ နဲ့ မတ်လအတွက် အပူချိန်နဲ့ မိုးရေချိန်တို့ကို ခန့်မှန်းချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ခန့်မှန်းရရှိတာကတော့ အအေးပေါ့ပြီး ခြောက်သွေ့မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
အပူချိန်အနေနဲ့ခန့်မှန်းချက်မျာဆိုရင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ရဲ့ လာမယ့်(၃)လအတွင်း တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုသာ အပူချိန်ဖြစ်မြဲခန့်ရှိနှိုင်ပြီး ကျန်တပြည်လုံး မှာတော့ ဖြစ်မြဲထက် ၄၅% မှ ၇၀% ခန့်အထိ ပိုနှိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်ကြတဲ့
တို့မှာ ဖြစ်မြထက် ၆၀% မှ ၇၀% အထိ ပိုနှိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အအေးပိုဖို့တော်တော်ခဲယဉ်းတဲ့သဘောလို့ဘဲ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ အထူးသဖြင့်မြောက်ဖက်က အအေးတွေတိုးလာဖို့ မရှိနှိုင်တော့တဲ့ သဘောပါဘဲ။
တို့မှာခြောက်သွေ့မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့အတွက် မိုးသာမက မြူတွေန နှင်းတွေ ကျဆင်းမှုမှာပါ အားလျော့နည်းမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဖက် ပစိတ်သမုဒ္ဒယာမှာလည်း မိုးတွေနဲ့ မုန်တိုင်းတွေ ပုံမှန်ထက် ပိုနှိုင်တာကြောင့် အထက်လတ္တီတွဒ်အမြင့်က လေအေးဖြစ်စဉ်တွေထက် အပူပိုင်းဒေသလေနွေးဖြစ်စဉ်တွေက ပိုမို လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့သဘော ကိုလည်း သုံးသပ်ရရှိကြောင်းပါဗျာ။
Posted by Myo Lwin Aung at 6:44 AM
NLD အပါအဝင်အခြားပါတီအမတ်တွေ ၂၂ဦးဘဲထောက်ခံသူရှိလို...
Messenger ကာ တွန်း
ရွှေတိဂုံ ဘိုးဘိုးကြီး ကို ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီဝင်မျာ...
မူးယစ်ဆေးဝါး သယံဇာတရောင်းရတဲ့ ငွေတွေကို ခိုးထားပြီ...
မြန်မာ စစ်စခန်း ၄ ခု နယ်စပ်တွင် တည်ဆောက်ဟု ဘင်္ဂလာဒေ...
ရွှေဘုံပေါ်မှ ပြည်တွင်း ဒုက္ခသည်များ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်၏ မကွေးတိုင်းတွင် ...
သတင်းမှားများကို အခြေခံ၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ထုတ်ပြန်ချ...
တာဝန်ကျတပ်ကြပ်ကြီး ခင်မောင်ကြည်က လိမ်ညာပြောဆိုကာ န...
မြန်မာဒုက္ခသည်များကိုခေါ်ယူမှု အမေရိကန် ရပ်ဆိုင်း
မောင်အောင်ဆန်း ၏ ပွဲဦးထွက်သတ္တိ...
တပ်မတော် (ရေ) တပ်တွင်းဖြစ်ရပ်မှန် အကြောင်းအရာများ ...
လိုအပ်ပါက မြန်မာပြည်ကို ကာကွယ်ရန် အသင့်ရှိဟု ရခိုင...
ရခိုင်တပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းမြ...
ပြည်ပရောက် ၈၈ ကျောင်းသား နဲ့UNHCR သမိုင်း
တယ်လီနောနှင့် အော်ရီဒူးကို ဆက်သွယ်ရေးလိုင်စင် လာမည...
“ခြေ/ဥ ပြင်ရေး မပြင်ရေး”
တရုတ်ပြည်မကြီးကနေ ဟောင်ကောင်ကို တင်ပို့လာတဲ့ ကြက်ေ...
“ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မှ အမေရိကန်အစိုးရ ထောက်ပံ့ကူညီမည်”...
ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအား ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် လိုအပ်နြေေ...
ခြစားမှုတွေ့ရင် အကူအညီ ချက်ခြင်းရပ်မယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်...
မိမိနှင့် သူတပါးကို ခန့်မှန်းလိုသူများအတွက်
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်...
“သင်္ကန်းကျွန်း မိကျောင်းကန် အပိုင်း ၁၊ ၂ ပြန်ပေးရန်...
တတိယမြောက် ကိုယ်ပျောက်စစ်ရေယာဉ် ရေချနိုင်ရန်စီစဉ်
အကွက်မျက်ခံရတဲ့ ဦးလေးရဲ့မိသားစုဝင်တွေ (ကလေးငယ်မျာ...
“၂၀၃၀ အမီ မြန်မာတပြည်လုံး လျှပ်စစ်မီးနဲ့ အရည်အသွေး...
လေးနွယ် - တွံတေးသိန်းတန် (+playlist)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် ပြောနေတာတွေနဲ့ ကျွန်တော်သိထ...
ရခိုင်လူမျိုး သမိုင်း အကျဉ်းချုပ်
ကျောက်မီးသွေး စက်ရုံမလိုရခြင်း အကြောင်းရင်း
အဟဲ.. ဆရာမန်းငြိမ်းမောင်တို့ 
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ နဲ့ အနီးမြို့ တချို့ က...
မလေးတွင် တရားမ၀င်အလုပ်သမားများ စတင်ဖမ်းဆီး
မြန်မာအစိုးရ နဲ့တိုင်းရင်းသား လူထု တရပ်လုံးကို မ...
တရားပွဲကို ခုတုံးလုပ်တဲ့ ပဲခူးတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ...
ဖခင်ဖြစ်သူ ရဟန်းတစ်ပါး၏ မျက်နှာကိုမှ မထောက် သံဃာသတ...
မိုးကုတ်မြိုမှာလက်နက်ကိုင်တစုက ၀င်ရောက် ဓါးမြတိုက်...
ထားဝယ်မြို့နယ် အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ ကို တွေ့ဆုံ...
စစ်မြေပြင်သုံး ခမောက်လေး တစ်လုံး အကြောင်း
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ၊ ကော်မတီဝင် ဦးသန်...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သာသနဝံသပါလ (ခေါ်) အမျိုးဘာသာ သာ...
ဦးအောင်သောင်းက ၎င်း၏ချမ်းသာမှုသည် ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်...
ကော့သောင်း ၈၈ သဘောထား
အဖြူနဲ့အစိမ်းကို ညစ်ညမ်းစေသော ကြံ့ ဖွတ်များ။
ကျွန်မတို့ မြိတ် ၂၀၁၄ မှာ
အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်တွေရော ခန့်အပ်သူပါ ကြီးမားသည...
“ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို မဲပေးေ...
တာမွေမြို့နယ်တွင် ဓါးပြ၍ခြိမ်းခြောက်ကာ လက်ကိုင်ဖုန...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဘားအံမြို့ ဟောပြောပွဲ
မွန်းတည့်နေ ဂျာနယ် အား ပြည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့တောင်းဆ...
ဘန်ကောက် ဆန္ဒပြပွဲအနီး လက်နက်တွေရှာဖွေတွေ့ ရှိ……
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့က ကျေးရွာတစ်ရွာမှာ ပျော...
မဲပျောက်နေခြင်းကြောင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ က...
၂ဝ၁၅ အမီ အာဆီယံရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မီရန် ၈ဝရာခို...
" အိမ်တွင်း လူသတ်မှုနဲ့ အလောင်းဖျောက်ဖျက်မှုကြီး "
သူတို့သမီး သန်း ၂၀ လောက် နှစ်စဉ်လိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံ...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီမြို့မှာ ဒိန်းမတ်လူမျိုး ကမ္ဘာလှည...
တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသား ဘဏ် အကောင့် မကြာခဏ ပိတ်ခံနေရ